I-TikTok Photo Edit Trend: I-Trend entsha ku-TikTok | XperimentalHamid
Umkhuba wokuhlela isithombe we-TikTok ubona isikhathi sawo. Izinkulungwane zabantu zizamile lo mkhuba wokuhlela futhi zinezinto zonke ezimangalisayo ezingakusho ngakho.
Abantu abaxhumane nalezi zithombe nabo bayamangala ngobuhle balezi zithombe.
Njengoba lo mkhuba udlondlobala, abantu banazo zonke izinhlobo zokudideka ezihlobene nalo mkhuba. Ukuze ngiphendule yonke leyo mibuzo, ngicwaninge kancane. Ngakho-ke ngibekezelele imizuzu embalwa ngaphezulu.
I-TikTok Photo Edit Trend:
Yini iTikTok Photo Hlela Trend?
Ungayenza Kanjani i-TikTok Photo Hlela Trend?
Lo mkhuba wokuhlela uyinkulumo yedolobha laseTikTok. I-TikTok inakho konke okuhle engakusho mayelana nalesi simo. Kwabanye, lo mkhuba ucacile futhi kulula ukuwulandela.
Kepha lokhu akulona iqiniso labaningi ababonakala bengatholi indlela elula yokusebenzisa lezi zindlela zokuhlela ukubona ukuthandwa kwabo kukhula.
Uma ungomunye walabo bantu abakwazile okuqukethwe okuphuma ngenxa yalo mkhuba kepha bengazi ukuthi bangakwenza kanjani, uze endaweni efanele.
Kulesi sihloko, ngizokunikeza lonke ulwazi olufanele oluzokusiza. Ngizokutshela ukuthi yini lo mkhuba nokuthi ungaba kanjani yingxenye yawo.
Lapha ungafunda esinye isihloko Kodwa Uma Engithanda TikTok
Sibonile zonke izinhlobo zamathrendi kuzingxenyekazi eziningi ezitholakala kwi-inthanethi. Ezinye zazo zingahle zibe cringy futhi zixakeke kepha iningi lazo azimbi kangako.
I-TikTok, ngokwengxenye yayo, ibe ngumanduleli uma kukhulunywa ngokuhlukahluka kwamathrendi. Eziningi zalezi zimfashini beziheha futhi ziyamangaza kangangokuba ziye zahlakazeka nakwezinye izingosi zokuxhumana nabantu.
Enye yezindlela ezinjalo yiTikTok Photo Hlela Trend. Lo mkhuba umayelana nokubuyisa okwedlule. Kwenziwa ngokuhlela izithombe zibe isitayela se-retro sokuvuna. Lezi zithombe, eceleni kwesitayela sokuvuna, zinokunye okukhethekile, okungukuthi, zanga ilanga.
Abantu bazithande kakhulu lezi zithombe. Abanye balayishe lezi zithombe namavidiyo kumaphrofayli abo futhi impendulo yabantu iyamangalisa.
Uma ufuna ukuhlela izithombe zakho usebenzisa lezi zindlela, ngokuqinisekile ushaye i-jackpot. Lapha ngizokutshela konke odinga ukukwazi.
Manje njengoba usunombono wokuthi lo mkhuba ufinyelela kanjani phezulu, kumele ngabe uyazibuza ukuthi ungakwenza kanjani lokho kokuqukethwe kwakho.
Kusukela u-Anaugazz, umsebenzisi weTikTok, alayishe izithombe zakhe ngaphansi kwalomkhuba, abantu bebelokhu becabanga ukukwenza lokho ezithombeni nakumavidiyo abo.
U-Anaugazz ulayishe isithombe sakhe ngomhla ka-30 Ephreli 2021, futhi ividiyo yakhe ithole ukubukwa okungaphezulu kwezigidi eziyi-13. Lokho kukhuluma kakhulu ngokuthi lo mkhuba uphole kanjani.
Ngakho-ke, ungaba kanjani yingxenye yalokhu kuthambekela? Okokuqala, udinga ukuba nefoni ye-iPhone okungenani ube nesibhamu ekuhleleni izithombe zakho namavidiyo. Ukuphela kokufanele ukwenze ukuya kunketho yekhamera bese ukhetha noma yisiphi isithombe / amavidiyo ofuna ukuwahlela.
Uma usulapho, iya kunketho ethi "Ukuvezwa" bese uyibeka ku-100. Bese, iya kusici se- "Brilliance" bese usetha lokho naku-100. Ngemuva kokwenza konke lokho, pheqela ku- “Gqamisa” bese ukusetha ukuze -32.
Ngokufanayo, setha i- "Shadow" to -26 ne- "Contrast" to -30. Manje setha i- “Brightness” to -15 ne- “Saturation” ibe ngu-10.
Ngemuva kwalokho, setha i- “Vibrance” ibe ngu-8, ne- “Warmth“ to 10. Ngemuva kokwenza lokho, unezinye izinto ezimbalwa okufanele uzenze. Khulisa i- “Tint” ibe ngu-29 no-“Sharpness” iye ku-14, “Definition” iye ku-23.
Ekugcineni, yiba nokuvakasha kokugcina emuva ku- “Exposure” bese usetha kwaba ngu-0 Voila!
Le hack yokuhlela isithombe seTikTok izokunikeza okulayishiwe kwakho ukuthinta okudingekayo.
Umkhuba esixoxe ngawo ugcwele yonke indawo ezinkundleni zokuxhumana. I-TikTok yokuhlela isithombe ye-hack yinto ongathanda ukuba nayo. Ngiyethemba ukuthi lokhu okuthunyelwe kukusizile ukuthi ube yingxenye yalo mkhuba.
Izigaba I-Tiktok Amathegi Ungayenza Kanjani iTikTok Photo Hlela iTrend, Yini iTikTok Photo Hlela Trend Imeyili kwemikhumbi